Umaki: impumelelo yamakhasimende | Martech Zone
Umaki: impumelelo yamakhasimende
Sezadlula izinsuku lapho amaqembu okuphumelela kwamakhasimende asebenza kanzima ngezingcingo ezingenamkhawulo namakhasimende ukuphatha. Ngoba manje yisikhathi sokukhipha kancane futhi uthole okuningi ngokuya ngempumelelo yamakhasimende. Konke okudingayo amasu athile ahlakaniphile, futhi mhlawumbe olunye usizo oluvela enkampanini yokuthuthukisa uhlelo lokusebenza lwe-SaaS. Kepha, nangaphambi kwalokho, konke kwehlela ekwazini izindlela ezifanele zokuphumelela kwamakhasimende. Kepha okokuqala, uqinisekile ukuthi uyazi ngaleli gama. Ake
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 15, i-2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Siqale ukuzibandakanya okusha nochwepheshe bempumelelo yamakhasimende, iBolstra. IBolstra ingumhlinzeki wezixazululo zesoftware (i-SaaS) yeBhizinisi ezinkampanini zeBhizinisi ezifuna ukukhulisa imali yazo ephindayo ngokunciphisa ukukhwabanisa nokukhomba amathuba we-upsell. Isixazululo sabo, ngemikhuba emihle eyakhelwe ngaphakathi, sisiza inkampani yakho ukushayela imiphumela oyifunayo efunwa ngamakhasimende akho. Eminyakeni embalwa eyedlule, njengoba uhambo lwethu lokumaketha olusheshayo seluguqukile futhi sihlola ukuvuthwa kokumakethwa kwebhizinisi
I-Gainight: Ipulatifomu yokuqonda kwamakhasimende nokugcinwa
NgoLwesibili, ngo-Mashi 18, i-2014 NgoLwesibili, ngo-Mashi 18, i-2014 Douglas Karr
IGainight yethule ukukhishwa kwentwasahlobo kwepulatifomu yayo yokuphathwa kwamakhasimende, okwenza kube lula nakakhulu ukuthi abathengisi bathole ukubukwa kwamakhasimende okungu-360 ° futhi basebenzisane nabanye ababambiqhaza bempumelelo yamakhasimende kuyo yonke inhlangano besebenzisa amandla we-data analytics. Ezinkampanini ezinkulu lapho iminyango eminingi ehlukene - kusuka ekuthengiseni kuya ekuthuthukisweni komkhiqizo nasekukhangiseni - abathengisi baphonselwa inselelo ngamaphoyinti emininingwane angafani ngomsebenzi wamakhasimende, kepha kumele benze umzamo ohlanganyelwe wokugcina amakhasimende